‘जनताको मन जित्ने चुनौती थपिएको छ’ – Sajha Bisaunee
‘जनताको मन जित्ने चुनौती थपिएको छ’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुर्खेतको प्रथम जिल्ला अधिवेशन मंगलवार सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनबाट मानबहादुर खड्का अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनी यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष थिए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड्कासँग हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले पार्टीको आगामी योजनासहितका विभिन्न विषयमा रहेर कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, खड्कासँगको कुराकानी :
-पार्टीकै काममा व्यस्त छु । दुई वटा राप्रपा एक भइसकेपछि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसैमा व्यस्त भएँ । अधिवेशनबाट सुर्खेत जिल्ला कार्यसमिति अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छ त्यसैले आगामी दिनमा पनि पार्टीकै काममा व्यस्तता रहनेछ ।
पार्टी एकतापछि पनि अध्यक्ष हुनुभयो अबको योजना के–के छन् ?
-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच एकता भइसकेको छ । राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकता भएपछि दुवैको झण्डा र चिन्ह मिलिसकेको छ । तर, राप्रपा नेपाल राजासहितको प्रजातन्त्रको सिद्धान्त र विचार बोकेको तथा राप्रपा गणतन्त्रको सिद्धान्त र विचार बोकेको भएकाले यसमा कुरा मिलाउनको लागि यही माघ २५ गते देशैभर वडा, गाविस, जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रियस्तरमै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । गणतन्त्रसहितको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने कि राजासहितको प्रजातन्त्रको विचार बोकेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भएको अधिवेशनमा जुनमा मत बढी आउँछ त्यही विचारका साथ राप्रपा अघि बढ्नेछ । अबको हाम्रो योजना भनेको हाम्रो पार्टी राप्रपाप्रति जनताको धारणा र विचार कस्तो छ भनेर बुझ्न प्रत्येक सुर्खेतबासीहरूको घरदैलोमा पुगेर संगठन विस्तार गर्ने रहेको छ । अब राप्रपालाई जनताको मन कसरी जित्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ । त्यो चुनौतीलाई पार गर्दै जनताको मन–मनसम्म राप्रपा पुग्ने कोशिसमा छ ।
यहाँको पार्टीले भने जस्तै के राजासहितका प्रजातन्त्र सम्भव होला त ?
-नेपाली जनताले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजा फाल्नुपर्छ भनेर नारा लगाएका थिएनन् । तर पछिका जनआन्दोलनमा विदेशीहरूको चलखेलमा राजा फाल्नुपर्छ भनेर गरिएको जनआन्दोलनले राजालाई पन्छाएको हो । यस विषयमा बारम्बार राप्रपा नेपाल लागि परेको छ कि राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गराउनुपर्छ । राजा भनेको राष्ट्रको प्रतिक हो । यदि हामीलाई सबैले साथ दिनुभयो भने पक्कै राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्नसक्छौं ।
हालै एकीकरण भएको पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने दायित्व छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ नि ?
– भर्खरै राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकीकरण भएको छ । यसमा अब हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । पार्टी एकीकरण पछि पनि विचार मिल्न सकेको छैन । त्यसैले देशैभर अधिवेशन भएको छ । राप्रपा नेपालको राजासहितको प्रजातन्त्र कि राप्रपाको गणतन्त्र भन्ने विषयमा भएको अधिवेशन अब फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा जुन पक्षको बहुमत धेरै हुन्छ त्यो नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । र पार्टीको मुख्य सिद्धान्त र विचार पनि त्यही हुनेछ ।
राप्रपालाई जिल्लामा लोकप्रिय बनाउन यहाँले कस्ता सपना तथा योजना बुन्नुभएको छ ?
-राप्रपाले अबका दिनमा प्रत्यक्ष जनताको घरदैलोमा पुगेर जनताको चाहना के हो, र उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझेर काम गर्ने छ । गाविस, टोलमा आएका बजेटलाई सही सदुपयोगमा लगाउनको लागि पहल गर्ने र समाजमा भ्रष्टाचार, हिंसा जस्ता विकृतिलाई हटाउन पहल गर्नेछ । यो राप्रपाको पहिलो काम हुनेछ । राप्रपा पार्टीलाई जनताको मन–मनसम्म पु¥याउनको लागि गाउँ–गाउँमा राप्रपा पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
जिल्लामा अन्य दलसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
-अन्य दलहरू आ–आफ्नै सिद्धान्त र विचारहरू छन् । ती सिद्धान्त र विचार यदि जनताको हितमा हुनेछन् भने हाम्रो पार्टी राप्रपा सदैव सहयोग र सहकार्यमा अघि बढ्नेछ । जनताको हितमा हुने खालको कामहरूमा राप्रपा सधैं सबैलाई साथ दिन तयार रहन्छ । यसरी नै अन्य दलहरूसँग पनि जनताको हितका काम र जनतालाई फाइदा तथा देशलाई फाइदा हुने खालको काममा हामी अन्य दलहरूसँग समन्यव गरेर काम गर्न तयार छौं । समग्र जिल्लाको विकासको लागि गरिने विकास निर्माणका योजनाहरूमा राप्रपा सधैं सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौं ।
जिल्लाको समग्र विकासमा यहाँको कार्यकालमा राप्रपाले कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ ?
-जिल्लाको विकासको पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, यातायात हुन् । यी विषयलाई आगामी दिनमा राप्रपाले समग्र जिल्लाको विकासका लागि सधैं लागि रहनेछ । प्रत्येक्ष जनतालाई फाइदा पुग्ने खालको कामहरू राप्रपाले गर्नेछ । जिल्लाको विकासका लागि आएको बजेटलाई दुरूपयोग हुन दिने छैनौं ।
अबको ६ महिनाभित्र कार्यकर्ताले अनुभूति गर्ने गरी यहाँले कुन–कुन काम गर्नुहुन्छ ?
-अबको ६ महिनाभित्रमा प्रत्येक वडा गाविसमा पुगी कार्यकर्ता भेटघाट तथा संगठन विस्तार हाम्रो पहिलो कदम हुनेछ र ती गाविस तथा वडाहरूमा कस्ता खालमा योजनाहरू कसरी भइरहेको छ । भ्रष्टाचार, हिंसा जस्ता विकृतिलाई न्यूनीकरणका लागि हाम्रो पार्टीले कदम चाल्नेछ । कार्यकर्तालाई पार्टीप्रतिको विश्वास दिलाउनको लागि पार्टीले सधैं पहल गर्नेछ ।
स्थानीय निवार्चन तत्काल आवश्यक छ त ?
– स्थानीय निवार्चन त जनताले नै चाहेका छन् । यहाँ जनताको चाहना अनुसार नै काम गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन जबसम्म हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ठूलो अखडा र नेपाली जनताहरूको दैनिक अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले स्थानीय चुनाव गराउनु अति आवश्यक रहेको छ । यसमा राप्रपाको पनि स्थानीय निवार्चन गराउनमा पूर्ण समर्थन छ ।
राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले देशका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिलाएर विदेशिनबाट रोक्न लगाउन जरुरी छ । यसतर्फ तत्काल कदम चालोस् भन्न चाहन्छु । अर्को कुरा ढिलै भए पनि अब स्थानीय निर्वाचन
हुनेछ । निर्वाचनबाट जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिनिधि छनौट गर्नका लागि आम जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मितिः २७ माघ २०७३, बिहीबार ११:२८